जो मलामी जाँदै थिए, आफैं रहेनन् ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारजो मलामी जाँदै थिए, आफैं रहेनन् !
जो मलामी जाँदै थिए, आफैं रहेनन् !
रुपन्देही।अर्घाखाँचीको मालारानी वडा नं २ कुभिण्डे घर भइ बुटवल उपमहानगरपालिका वडानं १७ को रानीगन्जमा बस्दै आएका ६८ वर्षीय वीरबहादुर बिकको शनिबार राती नि’धन भयो। वीरबहादुरको अन्त्ये’ष्टीका लागि घरपरिवार, छिमेकी सबै जुटेर आइतबार बिहानै बुटवलबाट गुल्मीको रिडी लागे । मृ,त’क बीरबहादुरका ६ भाइ छोरा मध्ये ५ भाइ छोराहरु सहित तीन दर्जन मलामी बस लिएर त्यता लागे भने केही आफन्त निजी सवारीमा मलामी गएका थिए। तर बिहान साढे १० बजे बस पाल्पाको रिब्दिकोट गाउंपालिका २ लगुवामा बस दुर्घ’टनामा पर्यो ।
त्यो दुःखद घटनामा मृ,त’क बीरबहादुरका छोरा पशुपति बिक सहित ७ जनाको घटनास्थलमै नि’धन भयो । बुवाको अ’न्त्ये’ष्टि गर्न गएका छोरा सहित ठूलो संख्यामा मलामीको नि’धन भएपछि र घटना दुई दर्जन भन्दा बढी मलामी घा’इते भए पछि पी’डितको परिवार तथा छिमेकमा थप सन्ना’टा छाएको छ । वीरबहादुरका ६ भाइ छोरामध्ये ५ जना दा’ह सं’स्कारको लागि गएका थिए । पशुपति वीरबहादुरका छोरा हुन् । वीरबहादुको इच्छा अनुसार उनको दा’ह सं’स्कारका लागि बुटवलबाट झण्डै १०० किलोमिटर टाढा रिडीतर्फ गाडी जाँदै थियो । बुबाको चाहना पूरा गर्न जाँदै गरेका उनी अन्ततः आफैँ रहेनन् ।
दुर्घ’टनामा बाँ’चेका घा’इतेको अनुभव : मृ,त’क वीरबहादुर विकका छिमेकी बुटवल रानीगन्जका ३१ वर्षीय थम्मन पचभैया सो बस दुर्घ’टनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन् । बस दुर्घ’टनामा परी बाँ’चेका बुटवल रानिगञ्जका थम्मन पचभैया ओरालोमा ड्राइभरकोे आत्मबल कमजोर बन्दा दुर्घ’टना भएको बताउँछन् । बुटवलबाट बस हिंडेपछि उकालो लाग्नसाथ ड्राइभरले बसलाई सजिलोसंग नचलाएको उनले अनुभव पहिले गरि सकेको बताएका छन् । ‘लगुवाको ओरालो लाग्नसाथ ड्राइभर आ’त्तियो । चिसो भएकाले पनि उसले गा’डी कन्ट्रोल गर्न नै सकेन । घटनास्थलमा गाडी निकै दौडियो । ड्राइभरले पछाडिको भाग कुनामा ठो’केर सिधा भयो । अनि गाडि तल झ’रेको हो ।’ उनले भने ।
उनले आफू अगाडिको सिट समातेर बसेका कारण केही नभएको बताए । गाडी संगै २ सय मिटर त’ल पुगेपनि केही नभएको उनले बताए ।‘ड्राइभर पहाडमा गाडी नचलाएको रहेछन्जस्तो उसको चलाइबाट थाहा हुन्थ्यो । ओरालामा आत्तियो । अनि घटना घट्यो’ ३१ वर्षीय पचभैयाले भने । उनले गाडि तीब्र गतिका कारण दुर्घ’टना नभएको बताउँछन् । घ’टनापछि चालक फ’रार भएका कारण पनि उनको ग’ल्ती भएको उनको ठम्याई छ ।
दुर्घ’टनास्थलमा शीतको चिसो भएको, साँघुरो घुम्ती रहेको सडक किनारका डिभाइडर भ’त्काउँदै घिसा’रिएर दुर्घ’टना भएको स्थानीयले जनाएका छन् । तराई क्षेत्रमा चलाएको चालक रहेको, पहाडी बाटोमा अनुभव नभएकोले दुर्घ’टना भएको अन्य सवारी चालक हरुले बताएका छन् । प्रहरीले घटनाको विषयमा अनु’सन्धान भइरहेको जनाएको छ । बस प’ल्टिदा च्या’पिँ’एर ३ जना मलामीको नि’धन भएपछि डोजर स्काभेटर प्रयोग गरी श-व निकालिएको थियो ।
शो’कमा छ रानीगञ्ज : आइतबारको घटनापछि पत्रकार बिरबहादुर विकको घर रानीगञ्ज पुग्दा त्यहाँ सन्ना’टा छाएको थियो । छरछिमेकी अनेक अड्कल बाजी गरिरहेका थिए भने कतिपयले मलामा गएकाहरुसंग सम्पर्क गर्न खोजिरहेका थिए । वीरबहादुर घरमा छोरीहरु र छिमेकी चुपचाप थिए । कसैसंग पनि बोल्न अप्ठ’यारो मानिरहेका थिए । ‘यो गाउँ शो’कमा छ । के यस्तो आइलाग्यो । यतै नजिकै लगेको भएपनि यस्तो घटना हुँदैनथ्यो होला ।’ छिमेकी सिर्जना शर्माले भनिन् ।
मृ,त’क सात जनाको सनाखत : बुटवलबाट श-व बोकेर पाल्पाको रिडी अत्ये’ष्टिका लागि हिंडेको बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नंं २ लघुवामा दुर्घ’टनामा नि’धन भएका ७ जना मलामीको सनाखत भएको छ। अर्घाखाँची माला रानी गाउँपालिका वडानंं २का २५ वर्षीय शंकर वि.क., सोही स्थानकै ३६ वर्षीय मोहन कुँवर, सोही स्थानकै २८ वर्षीय भोजेन्द्र वि.क., सोही स्थानकै ३३ वर्षीय अर्जुन वि.क. बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ का ३० वर्षीय पशुपति रसाइली, सोही स्थानै ४० वर्षीय खुमबहादुर राना, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ का ३२ वर्षीय विजय थापाक्षेत्रीको सनाखत भएको पाल्पा प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर त्वातीले बताए ।
शनिबार राती नि’धन भएका बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं ११ बुद्धनगरका ६८ वर्षीय विरबहादुर विकको श-व लिएर गुल्मीको रिडी जाँदै गर्दा पाल्पाको लघुवामा बस दुर्घ’टनामा परेको थियो। घा’इतेमध्ये ९ जना लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास र ६ जनाको मिसन अस्पतालमा उप’चार भइरहेको छ ।
अस्पतालका अनुसार घा’इते हुनेमा बुटवल १७ का ३८ वर्षीय, विशाल रसाइली, सोही स्थानका बर्ष ४५ का धनबहादुर सुनार, सैनामैना ६ रुपन्देहीका ३१ वर्षीया मिरा राम दाम, सोही स्थानकै ५० वर्षीय श्याम बहादुर वि.क., पाणिनि १ अर्घाखाँचीका ४५ वर्षीय गोपाल नेपाली, छत्रकोट ३ अर्घाखाँचीका ४३ वर्षीय लालबहादुर वि.क., मालारानी २ अर्घाखाँचीका ३७ वर्षीय रमेश टोहटो, तिलोत्तमा १४ रुपन्देहीका ४५ वर्षीया दिलमाया सुनार, सोही स्थानकै तारा सुनारको लुम्विनी मेडिकल कलेजमा उपचा’र भइरहेको छ ।
घा’इते मालारानी २ अर्घाखाँचीका ३९ वषीय तुल्सीराम वि.क., सोही स्थानकै २२ वर्षीय दिपक वि.क. ४० वर्षीय अर्जुन रसाइली, ३५ वर्षीय लक्ष्मण टोहटो, २७ वर्षीय विष्णु वि.क.,१३ वर्षीय बरुण रसाइली र वुटवल उपमहानगर १२ का ४८ वर्षीय माधवप्रसाद बस्यालको मिशन अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।